Intel Alder Lake Core i9 သည် M1 Max ထက် ပိုမြန်သော်လည်း ညစ်ပတ်သော ကစားကွက်များ ငါ mac ကပါ။
Intel Alder Lake Core i9 ပရိုဆက်ဆာသည် M1 Max ထက် ပိုမြန်သော်လည်း ညစ်ပတ်စွာကစားခြင်း။
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က Intel သည်၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုအာမခံခဲ့သည်။ Alder Lake Core i9 Apple ရဲ့ M1 Max ထက် ပိုမြန်တယ်။ ယခုအခါ MSI လက်ပ်တော့တစ်လုံးတွင် ပထမဆုံး စျေးကွက်တွင် စတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ကာ၊ မြောက်အမေရိက ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်သူ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းပြင်ပတွင် သက်ဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အမှန်က နည်းပညာအရ ဟုတ်ပါတယ်၊ Intel ပရိုဆက်ဆာအသစ်က ပိုမြန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အချက်အလက်ကိုကြည့်ရင်၊ လက်တွေ့မှာ "အောင်ပွဲ" က အနိမ့်ဆုံးနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ "trapdoor" နှစ်ခုကို ဖန်တီးထားတာကို တွေ့ရတယ်။ ကတိသစ္စာပြုပါသည်။
စာရွက်ပေါ်တွင်၊ အပလီကေးရှင်းမှပစ်သောဒေတာကိုသာကပ်ထားလျှင် Geekbenchပရိုဆက်ဆာ စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်မှုများတွင် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည့် Intel သည် ၎င်း၏ Alder Lake Core i9 ချစ်ပ်သည် Apple ၏ M1 Max ထက် ပိုမြန်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့် အမှန်တရားကတော့ စမ်းသပ်မှုကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို Intel က ဒီလို ပြင်းထန်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကနေ အများကြီး ရုန်းမထွက်နိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။
ဤ Geekbench စမ်းသပ်မှုများကို ဂိမ်းဆော့ရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် လက်ပ်တော့တစ်လုံးပေါ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ MSI သည် GE76 Raider. i9 ၏ ကုန်ကြမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏ ရလဒ်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း ၎င်းသည် M1 Max ကို 5% သာကျော်သည်။ အရမ်းတရားတယ်၊ တကယ်ပဲ။
Geekbench5၏ multi-core CPU စမ်းသပ်မှုတွင်၊ Alder Lake Core i9 သည် Apple ၏ ပရိုဆက်ဆာထက်5ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိသည်။ single core test တွင် Alder Lake ၏တိုးတက်မှုသည် 3,5 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ အဲဒါ အခြေခံအားဖြင့် လည်စည်းတစ်ခု. သံသယမရှိဘဲ သုံးစွဲသူအတွက် မမြင်နိုင်သော ခြားနားချက်။
i9 သည် M1 Max ထက် သုံးဆပိုမိုစားသုံးသည်။
ဒါပေမယ့် Intel ဟာ အနိုင်ရသူဖြစ်လာဖို့ တရားမျှတစွာ မကစားခဲ့ပါဘူး။ Cinebench R23 multi-core စမ်းသပ်မှုအတွင်း၊ Alder Lake လက်ပ်တော့သည် 100 watts ထက် အဆက်မပြတ် စားသုံးနေပြီး၊ 130 နှင့် 140 ဝပ်. M1 Max သုံးစွဲမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်၊ 39,7 watts ကလက်ပ်တော့ပရိုဆက်ဆာဖြစ်ဖို့က အားသာချက်မဟုတ်ဘူး ဆိုကြပါစို့။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ MSI ကို လျှပ်စစ်စီးကြောင်းမှ ဖြုတ်ပြီး ဘက်ထရီဖြင့် အသုံးပြုပါက M9 Max ကို "ကျော်လွှား" နိုင်စေရန်အတွက် အဆိုပါ i1 ၏ စူပါပါဝါသည် သက်ပြင်းချနိုင်သော်လည်း Apple ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ သင်သည် ပြဿနာမရှိဘဲ နာရီပေါင်းများစွာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ “ထောင်ချောက်” သည် MSI လက်ပ်တော့၏ ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အဆိုပါ Core i9 ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲကို ၎င်း၏ GPU နှင့် တွဲချိတ်ပါ။ Nvidia RTX3080Tiသေချာပါတယ်၊ M1 Max ရဲ့ အတွင်းပိုင်းဂရပ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကွာခြားချက်တွေက သိသိသာသာကြီးပါပဲ။
MSI သည် OpenCL ရမှတ်ကို ရရှိသည်။ 143.594 ဆန့်ကျင် 59.774 M1 Max ၏ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တကယ့် နှိုင်းယှဉ်မှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Intel ပရိုဆက်ဆာ၏ ပေါင်းစပ်ထားသော GPU ကိုသာ အသုံးပြု၍ အရာများသည် အလွန်ကွဲပြားသည်။ အဲဒီမှာ Intel ကပဲ ရယူခဲ့တာပါ။ 21.097 မှတ်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် MSI GE76 Raider လက်တော့ပ်သည် i9 ပရိုဆက်ဆာကို M1 Max ထက် 5% အမြန်နှုန်းဖြင့် ညှစ်နိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း၊ ပလပ်ထိုးထားသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် Apple ပရိုဆက်ဆာထက် သုံးဆပိုမိုစားသုံးသော မြန်နှုန်းသို့ရောက်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်တွင်၊ သင်အသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံး၎င်းသည် MSI ကိုအနိုင်ရရှိသည်။ အထူးဂရပ်ဖစ် Nvidia RTX3080 Ti ဂိမ်းအတွက်။ Intel မှ ပေါင်းစပ်ထားသည့်အရာကို ဆွဲထုတ်ပါက M1 Max မှ ပေါင်းစပ်ထားသည့်အရာနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှု ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒါက i9 က အနိုင်ရပေမယ့် လှည့်စားတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » MacBook Pro » Intel Alder Lake Core i9 ပရိုဆက်ဆာသည် M1 Max ထက် ပိုမြန်သော်လည်း ညစ်ပတ်စွာကစားခြင်း။
Safari ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် macOS 12.2 ကို ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
လူမျိုးရေးတရားမျှတမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုကို ပံ့ပိုးရန် Unity Lights နယ်ပယ်သစ်